Sony Pictures မှထုတ်လုပ်သောဝန်ဆောင်မှုများအသံအဖွဲ့သည်“ Jumanji: The Next Level” အတွက်ကစားပွဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Sony Pictures မှထုတ်လုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများသည်“ Jumanji: The Next Level” အတွက်ကစားပွဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်။
Kevin Hart၊ Dwayne Johnson၊ Karen Gillan နှင့် Jack Black
ကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများ ' Jumanji: အဆိုပါ Next ကိုအဆင့်, 2017 hit ကနေဂိုဏ်း, Jumanji: အ Jungle မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဂိမ်းပြောင်းလဲသွားသည်။ သူတို့တစ် ဦး ကိုကယ်တင်ရန် Jumanji သို့ပြန်လာသည့်အခါသူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဘာမျှမရှိကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကစားသမားများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဂိမ်းမှလွတ်မြောက်ရန်ခြောက်သွေ့သောသဲကန္တာရမှသည်နှင်းဖုံးတောင်များအထိမသိသောနှင့်မရှာဖွေရသေးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုရဲရင့်ရမည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်မြောက်အမေရိကရုပ်ရှင်ရုံသို့သွားသောရုပ်ရှင်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Box Office တွင်ဒေါ်လာသန်း ၆၀၀ ကျော်စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ပြန်လာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမှတ်အသားသည်အဖွဲ့သည် Sony က Pictures ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည်အစောပိုင်းရုပ်ရှင်၏တေးသံကိုဖန်တီးသည်။ အသံတည်းဖြတ်သူ / ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသောအသံအယ်ဒီတာ / ဂျူလီယန်ဆလတ်၊ အသံအယ်ဒီတာဂျိုဝဲလ်ရှရက်ခ်နှင့်ပြန်လည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းရောနှောခြင်းတို့ဖြင့် ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့သည်ရုပ်ရှင်၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာအသံများစွာကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုမြင်ကွင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သောအမြင်အာရုံများ၊ မော်ကွန်းတည်နေရာများနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြံစည်မှုလှည့်ကွက်များ။
“ အရင်တုန်းကအတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး Jumanji လောက၊ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ Jake Kasdan ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုအကျွမ်းတ ၀ င်ရှိခြင်းကြောင့်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး ခေါင်းကိုစခဲ့တာပါ။ "ဒါပေမယ့်ဒီဟာအများကြီးပိုကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ပါ! နောက်ထပ်မြင်ကွင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီတော့အရာအားလုံးဟာပိုကြီးပြီးပိုပြီးရဲရင့်ရမယ်၊ ပရိသတ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပေးရမယ်။ ” အဖွဲ့၏အဓိကသော့ချက်များတွင် Foley Artists Gary Hecker နှင့် Adam DeCoster နှင့် Sound Designers Chuck Michael နှင့် Ken McGill တို့ပါဝင်သည်။
အစောပိုင်းကရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ပင် Jumanji လောက၏ဂုဏ်သိက္ခာသည်အသံအသင်းအတွက်ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ကစားသမားများဂိမ်းထဲသို့ ၀ င်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သည့် ၀ န်းကျင်တစ်ခုတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်းခံရသည်။ Shryack က“ သူတို့ဟာစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာမှာ avatars တွေဖြစ်ပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးဟာကာတွန်းမဟုတ်ပါဘူး။ "အရာကအစစ်အမှန်ကြည့်ပေမယ့်အရာအားလုံးကိုမြင့်တက်နေပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်တကယ့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်တူသည်၊ သို့သော်ထိုသတ္တဝါများသည်အသက်ထက်ပိုကြီးပြီးမမျှော်လင့်ဘဲမကြာခဏအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ပြုမူကြသည်။ ”
ထိုမြင့်မားသောအဖြစ်မှန်ကိုအသံဖြင့်ဖော်ပြခြင်း၏အကောင်းဆုံးဥပမာမှာပြောင်မြောက်သော mandrills ပါဝင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်၏သူရဲကောင်းများသည်ရှုပ်ထွေးသောကြိုးတံတားများကိုဖြတ်ပြီးဒိန်းမတ်သားရာချီသောတိရစ္ဆာန်များကလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးသူတို့၏ဘဝများနှင့်အတူအနိုင်နိုင်ဖြစ်သည်။ အသံသည် CG-animated rampaging mandrills များကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေရေးနှင့်လူသားဇာတ်ကောင်များသည်အန္တရာယ်ရှိသောတံတားများကွန်ယက်ကိုသွားလာရန်တင်းမာမှုကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်သည်။ “ Mandrill တစ်ထောင်ဖန်တီးခြင်းကိုလုပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ “ ဒါဟာရှည်လျားတဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုပါ။ အဲဒီသတ္တဝါတွေရဲ့အသံကအရမ်းကျယ်လောင်မယ်ဆိုရင်ခက်ထန်ပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ၎င်းကိုသင်စိတ် ၀ င်စားရန်နှင့်တည်ဆောက်ရန်ပိုမိုပြင်းထန်စေရန်လိုအပ်သည်။ ”
Jwayji ရှိ Dwayne Johnson နှင့် Kevin Hart ကြယ်ပွင့်: The Next Level
ဒီအနုပညာသမားများနှင့်အခြားအသံထွက်များကိုအစစ်အမှန်ကမ္ဘာမျောက်များအားအသံသရုပ်ဆောင်မှထုတ်လုပ်သောတိရိစ္ဆာန်အသံများနှင့်ရောစပ်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ထိုဒြပ်စင်များမှအသံအယ်ဒီတာများသည်သားရဲအတွက်ဘုံ“ ဘာသာစကား” ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Shryack က“ ကျွန်တော်တို့ဟာအော်ဟစ်ငိုကြွေးသံအမျိုးမျိုးကိုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြုအမူဟာမင်းရိုင်းရိုင်းမှာတွေ့ရတာထက်ပိုပြီးရန်လိုတတ်တယ်။ “ အနီးကပ်ရိုက်ချက်တွေအတွက်ညည်းတွားသံနဲ့အော်ဟစ်ခြင်းတိုင်းဟာလက်နဲ့လုပ်ထားတာပဲ။ ”
မိုက်ကရိုကဤသို့ထပ်ဆင့်ပြောကြားသည် -“ အနုဆေးသီးတစ်မျိုးစီကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ၊ သူတို့ဟာတံတားပေါ်ကနေခုန်ဆင်းတာ၊ ခုန်ချတာတွေဖြစ်စေ၊ သူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုအားဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဇာတ်လမ်းရဲ့လှည့်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့လိုတယ်။
အနုဆေးရောင်များကဲ့သို့ပင်ကြိုးလှေကားများသည် CG ဖန်တီးမှုများဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သူတို့၏သံများဖြစ်သောကြိုးများ၊ သစ်သားပြားများတွားသွားခြင်းနှင့်ကွဲထွက်ခြင်းတို့ကိုပို့စ်တွင်ထည့်သွင်းရသည်။ “ ဒါဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပဲ။ "တော်တော်များများအနီးရှိလွဲကြုံတွေ့အများအပြားဇာတ်ကောင်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသည်။ တစ်ချိန်တွင် Karen Gillan သည်ကျန်အဖွဲ့များနှင့်ကွဲကွာနေပြီးသူဘာလုပ်ရမည်ကိုသိရန်ကြိုးစားသည့်အခါသူမနောက်ကွယ်မှအထူးသဖြင့်ရက်စက်သော mandrill ဖြင့်တိုက်ခိုက်သည်။ သူမခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအသံ၊ mandrill နှင့်တံတားတို့ကိုအနီးကပ်ခေါ်ဆိုမှု၏ခံစားချက်ဖန်တီးရန် ထပ်မံ၍ ကြိုးကိုင်ခဲ့သည်။
Foley သံကိုမုန်းတီးခြင်းနှင့်သရုပ်မှန်အတွက်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Hecker က“ သူတို့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ခြေရာတိုင်းကိုသူတို့ပြေးကြ၊ တံတားကနေတံတားပေါ်ခုန်ဆင်းခုန်ပြေးနေကြတယ်” ဟုပြန်ပြောပြသည်။ "ကျနော်တို့ကဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုသီးခြားစီလုပ်ခဲ့တာပါ။ လက်တွေကိုင်တာနဲ့အလောင်းတွေလဲတာတွေလုပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇာတ်ကောင်တွေပြေးနေရင်းခုန်နေကြတာ၊ တံတားတွေပြိုလဲနေလို့ပါ။ ဘုတ်များပြိုပျက်သွားပြီးတံတားများကိုဆက်သွယ်ထားသောကြိုးများချိတ်မိသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာကိုရှင်သန်လာစေဖို့နဲ့အန္တရာယ်ကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ဒီအသံတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့ရတယ်။ ”
အဆိုပါအသံအဖွဲ့သည်သူရဲကောင်းများသည်ကြီးမားသောကုလားအုတ်ငှက်ကုလားအုတ်များမှထွက်ပြေးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်အချိန်တွင်ရုပ်ရှင်၏အစောပိုင်းကဖြစ်ရပ်များတွင်အလားတူသရုပ်မှန်နှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ mandrills ကဲ့သို့ပင်ပျံသန်းနေသောငှက်များသည်သူတို့၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာများထက်ပိုမိုကြီးမားပြီးအန္တရာယ်လည်းပိုသည်။ McGill ကပြောကြားသည်မှာ“ အရာဝတ္ထုတွေဟာတကယ်ကိုကြည့်ရပေမယ့်ပုံကြီးချဲ့ထားတာပါ။ Jumanji လောကမှာအလုပ်လုပ်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ “ ငှက်ကုလားအုတ်တွေအများကြီးကိုငါတို့နားထောင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ့်ငှက်တွေဟာအသံသိပ်မများဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကြက်တူရွေးတွေနဲ့ macaws တွေကိုသုံးပြီးသူတို့ကိုပိုကြီးတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆောက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဆုံးမဲ့စကားမပြောနိုင်သောသတ္တဝါများနှင့်အတူအဆုံးသတ်လိုက်သည်၊
သူရဲကောင်းများသည်ငှက်များကိုသံချေးမြည်တီးသောမြူခိုးများထဲသို့ခုန်ချခြင်းဖြင့်ရှောင်ရှားကြသည်။ ငှက်များနှင့်မတူသည်မှာသိသာထင်ရှားသည့်သက်ရောက်မှုအတွက်ထိုယာဉ်များအတွက်အသံများကိုလည်းတိုးမြှင့်ထားသည်။ Slater က“ ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ့်ခွန်တေးဂီတတွေရဲ့မူလအသံသွင်းချက်အချို့ကိုလုပ်ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ဟာအရေးတကြီးသို့မဟုတ်အန္တရာယ်များကိုမှန်ကန်တဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် V8 ကုန်တင်အင်ဂျင်နဲ့ပြိုင်ကားများရဲ့အသံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအားပေးခဲ့တယ်။
မိုက်ကယ်ကဤသို့သဘောတူသည် -“ သူတို့ရဲ့အင်ဂျင်တွေဟာလက်တွေ့မှာထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်ပြီးအနည်းငယ်ပိုကြာသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်သူကမယုံသင်္ကာမဖြစ်ပါဘူး။ ပရိသတ်ကိုမြင်ကွင်းတွင် ၀ င်ကြည့်သည်။ သူတို့သည်အသံကိုသတိမထားမိကြသော်လည်း၎င်းကသူတို့ကို Jumanji သို့ ပို၍ ဆွဲဆောင်သည်။
ထပ်မံ၍ Foley အဖွဲ့သည်သဲကန္တာရထဲမှပြေး။ ငှက်များ၏အတောင်များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုတုပရန်ငှက်ကုလားအုတ်များကို အသုံးပြု၍ သိပ္ပံနည်းကျလှူဒါန်းခဲ့သည်။ "ငှက်တစ်ကောင်က Dune Buggy Dwayne Johnson နဲ့ Kevin Hart ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ စီးနေပြီးခေါင်မိုးပေါ်ကအပေါက်တွေကိုစစထွက်နေပြီ" ဟု Hecker ကထပ်ပြောသည်။ "ဒီသတ္တုကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းရင်းငှက်တွေကိုထိုးဖောက်နိုင်တဲ့အသံတွေဖန်တီးဖို့ကျနော်တို့ကိရိယာတွေ၊ သတ္တုပြားတွေကိုသုံးခဲ့ကြတယ်။ "
Jumanji ရှိ Kevin Hart နှင့် Jack Black: နောက်အဆင့်
အဆိုပါတေးသံကို Dolby Atmos ရှိ Slater နှင့် O'Connell မှပေါင်းစပ်ခဲ့သည် Sony က ရုပ်ပုံများစတူဒီယို၏သမိုင်းဝင် Cary Grant ပြဇာတ်ရုံ။ အိုဒီကော်နဲလ်က“ ဒီရုပ်ရှင်အတွက်ရောစပ်ရတာဟာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ။ "ကျွန်တော်တို့မှာမယုံနိုင်လောက်တဲ့အသံဒီဇိုင်းဒြပ်စင်တွေရှိခဲ့တယ်၊ ဟင်နရီဂျက်ကန်းရဲ့အံ့ score စရာရမှတ်နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အလွန်ကောင်းမွန်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ "
Slater ကရုပ်ရှင်ပရိသတ်များတွေ့လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည် Jumanji: အဆိုပါ Next ကိုအဆင့် ယင်း၏ယခင်ခံထိုက်သောဆက်ခံထက်ပို။ “ ဒါကရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်။ “ ဒီဇာတ်လမ်းကနောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ရဲ့ပျော်စရာကိုတည်ဆောက်ပြီးအသစ်သောနယ်ပယ်ထဲကိုတွန်းပို့ပေးတဲ့လိမ္မာပါးနပ်တဲ့လှည့်ကွက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ အဲဒါကငါတို့အဖွဲ့ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်အတွက်ဖန်တီးထားသောအကြောင်းအရာများစွာကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ငါတို့ကစားပွဲကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ လမ်းကြောင်းအသစ်သို့တွန်းပို့သည်။
အကြောင်း JUMANJI: နောက်လာမည့်အဆင့်
Jake Kasdan မှရိုက်ကူးသည်။ Jake Kasdan & Jeff Pinkner & Scott Rosenberg မှရေးသားခဲ့သည်။ Chris Van Allsburg မှ Jumanji စာအုပ်ကိုအခြေခံသည်။ Matt Tolmach၊ Jake Kasdan၊ Dwayne Johnson၊ Dany Garcia နှင့် Hiram Garcia မှထုတ်လုပ်သည်။ အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများမှာ David Householter၊ Melvin Mar၊ Scott Rosenberg၊ Jeff Pinkner၊ William Teitler, Ted Field နှင့် Mike Weber တို့ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သော Dwayne Johnson၊ Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Danny Glover နှင့် Danny DeVito တို့ပါဝင်သည်။
အကြောင်း SONY ရုပ်ပုံဖျော်ဖြေမှု
Sony Pictures Entertainment က (SPE) တိုကျိုအခြေပြု၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ် Sony က ကော်ပိုရေးရှင်း။ SPE ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှု, ဝယ်ယူနှင့်ဖြန့်ဖြူးပတ်ဝိုင်း; ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု, ဝယ်ယူနှင့်ဖြန့်ဖြူး; ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များ, ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး; စတူဒီယိုအဆောက်အဦ၏စစ်ဆင်ရေး; အသစ်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ SPE ရဲ့ Motion Picture Group မှထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းများကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများ, မျက်နှာပြင်ကျောက်မျက်ရတနာ, TriStar ရုပ်ပုံများပါဝင်သည်, Sony က ရုပ်ပုံများ Animation ရဲ့, စင်မြင့်6ရုပ်ရှင်, ကတိသစ္စာပြုရုပ်ရှင်နှင့် Sony က ရုပ်ပုံများဂန္တဝင်။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, ခရီးစဉ် www.sonypictures.com/corp/divisions.html.
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Jumanji post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - အသံက လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ 2020-01-13
ယခင်: Little Mix နှင့်အတူ Tour သို့သွားစဉ် Blackmagic URSA Mini Pro
နောက်တစ်ခု: NUGEN Audio သည် NAMM 2020 ၌ SEQ-S ဆော့ဝဲလ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သည်